Amaanka Garoonka Lagu Qabanaayo Ciyaarta Finalka Champions League Oo Aad Loo Adkeeyey Iyo Alaabooyin Gaar Ah Oo Laga Mamnuucey | Saxil News Network
Amaanka Garoonka Lagu Qabanaayo Ciyaarta Finalka Champions League Oo Aad Loo Adkeeyey Iyo Alaabooyin Gaar Ah Oo Laga Mamnuucey
Hawlgalkii ugu weynaa ee sanadkaan laga sameeyo garoomada kubadda cagta laguna sugo amniga dhaq-dhaqaaqyada kubadda cagta ayaa laga sameynayaa garoonka ku yaala magaalada Cardiff ee lagu qabanayo final-ka koobka Champions League.
Juventus iyo Real Madrid ayaa ku kulmaya Principality Stadium, Booliska Wales ayaana qaadaya masuuliyadda amaanka, waxaana la filayaa in 200,000 kun oo qof ay usoo daawasho tagto kulankaan kuwaas oo gudaha iyo banaanka garoonkaba buux dhaafin doona.
Final-kaan wuxuu ku soo aaday xilli maalmo ka hor qarax weyn lala beegtay goob ay fanaanad reer Mareykan ah bandhig faneed ku qabaneysay oo ku taala magaalada Manchester markaas oo 22-qofood ay qurbaxeen.
Waxaa gabi ahaanba la xidhay Cardiff Bay iyo sidoo kale qeybta wabiga Taff ee soo gasha garoonka, sidoo kalana booliska waxaa masuuliyad ka saaran tahay kumanaanka kun taageerayaal ee wadooyinka isticmaali doona.
2,000 (Laba kun) oo boolis ah ayaa ka qeyb qaadaneysa ololahaan sidoo kale diyaaradaha Drones-ka loo yaqaano ayaa ka qeyb qaadanaya, lama ogolo wax boorso ah dhamaan qof walba oo ka qeyb qaadaneysa daawashada kulankaan ee gudaha garoonka.
Sidoo kale barnaamijka lagu aqoonsado wajiga ayaa ku xiran dhamaan kaamirooyinka banaanka iyo gudaha garoonka kuwaas oo loo isticmaali doono in amaanka qeyb looga sugo, sawirada ay qabanayaan waxaa waxaa loola dan leeyahay in lagu hubiyo hadii ay taageerayaasha kusoo dhex-dhuuntaan shaqsiyaad argagixiso oo laga shakisan yahay iyo dadka rabashadaha garoomada ka abuura.